Best Music Ọhazi
Ị nwere ike iji a music Ịhazi ngwa ọcha na idozi gị oke music n'ọbá akwụkwọ, nke ma ọ bụrụ na mere aka ga-abụ oge na-ewe na-agwụ ike usoro. Isiokwu a kwuru banyere na-eji tụnyere ụfọdụ mma music ahazi maka Windows na Mac OS X nyiwe.
Part m: Best Music Ọhazi maka iTunes - Wondershare TunesGo
Part II: Best Music Ọhazi maka Windows na Mac OS X
Otu nke kasị mma music ahazi dị rue ụbọchị maka Apple ngwaọrụ bụ Wondershare TunesGo. Ngwa natara ndị kasị elu kpakpando Fim si ọgwụgwụ ọrụ n'etiti ya ọtụtụ asọmpi. The ọhụrụ mbipute nke software bụ 4.6.10 na nwere ọtụtụ revolutionary ọganihu ka tụnyere ndị okenye version. Ọ bụ ezie na ọ bụ a na-akwụ ụgwọ ngwa, àgwà nke ọrụ nyere site omume bụ uru na-ajụ price. Wondershare TunesGo na mgbe nile kwalite site na mmepe na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị kasị elu music otu. Ọ bụ ezie na software dị maka Windows n'elu ikpo okwu dị ọma, ọ na-arụ ọrụ kacha mma na Apple ngwaọrụ, ntụgharị maka Mac OS X na iOS.
Wondershare TunesGo-enyere gị aka igosi na ọtụtụ ihe aga-eme na ike rụọ ọrụ nke ọma hazie egwu gị ọbá akwụkwọ, ụfọdụ nke nwere ike ghara enweta ọbụna site na iji iTunes. Ngwa bụ kemfe na-ahapụ gị nyefee data n'etiti gị Apple ngwaọrụ site kpamkpam gafere iTunes na usoro.
Uru: • All atụmatụ nke ngwa nwere ike mfe ịnweta site ihe dị ọcha nakwa anya enwekwukwa interface.
• Ị nwere ike ijikọ ma nyefee data n'etiti multiple Apple ngwaọrụ n'otu oge nke na-ebelata cumbersome ọrụ nke itinye data na kọmputa gị mbụ . A ukwuu streamlines data transfer usoro.
• The software-enyere gị iji tọghata music na video faịlụ n'ime Apple akwado formats.
• iji ngwa a, ị nwere ike ihichapụ oyiri faịlụ site na gị ọbá akwụkwọ mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
• The na-wuru kensinammuo atụmatụ nke software na-akpaghị aka fixes album nkà, album ọmụma na mkpado ọmụma.
• Na ngwa a, i nwere ike ịkọrọ music na vidiyo n'etiti iCloud (ekedepde a dị iche iche Apple ID) na iTunes n'ọbá akwụkwọ.
• The 24/7 support nyere site Wondershare si oru otu nwere ike inyere gị site na ndụ chat bụrụ na ị nwere ọ bụla mbipụta na-eji software.
A tabulated tụnyere table n'etiti 6 kasị mma music ahazi e nyere n'okpuru-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na họrọ onye nke bụ kasị mma ruru eru gị mkpa. A nkọwa zuru ezu maka onye ọ bụla nke kwuru na-ahazi e nyere mgbe tebụl.
Njirimara \_ aha 1. Tuneup Media 2. Foobar2000 3. MusicBee 4. MediaMonkey 5. itucha My Music 6. MusicBrainz Piccard
Akwado Sistem (s) Windows, Mac, na iOS Windows Windows Mac OS X, na Windows Mac OS X Mac OS X, Windows, Linux
Ahịa Free ikpe mbipute maka Windows. Ụgwọ mbipute maka Apple efu $31.99. Ọ bụ a freeware Ọ bụ ihe na Egbochighi freeware. ree ikpe mbipute dị. Nwere ike kwalite ka 'gold' version maka $ 20 Nwere ike zụrụ maka $39.99 Ọ bụ a freeware.
Star Ratings (nke 5 kpakpando) 5 kpakpando 4 kpakpando 4 kpakpando 4 kpakpando 4 kpakpando 5 kpakpando
Na-akwanyere ùgwù Atụmatụ • Enye gị iji hazie egwu gị n'ọbá akwụkwọ.
• 'DeDuper' mma na-ahapụ gị ihichapụ oyiri faịlụ.
• 'Tuniverse' bụ smart atụmatụ nke ngwa • na-abịa na a dị mfe ma dị ọcha interface.
• Gapless playback atụmatụ-enyere gị na-egwu ọdịyo faịlụ-enweghị nkwụsị. •-enye gị ohere mbubata ọdịyo faịlụ site iTunes na Windows Media Player.
• abịa na a streamlined na mfe na-eji interface. • Ọ dịla a kpam kpam customizable interface.
• kensinammuo atụmatụ na-akpaghị aka fixes-efu metadata ọmụma. • Na akpaghị aka na-agbakwụnye na-efu album nkà na gị n'ọbá akwụkwọ.
•-enye gị ohere ihichapụ oyiri faịlụ na ịrụ a 'ule nhichapụ' iji hụ na ezi faịlụ ga-ehichapụ. • mfe iji na ọcha interface-eme ka ọ adaba n'ihi na beginners.
• Na akpaghị aka fixes na ụdị gị music n'ọbá akwụkwọ.
• akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ formats.
akwado Operating System: Windows na Mac About: TuneUp Media bụ ihe dị mfe nkwụnye na na a kwesịrị-nwere enyi ngwa mgbe ọ na-abịa ihicha ma na-ahazi gị music n'ọbá akwụkwọ. Na-enriched na pụrụ iche smart atụmatụ na-eme ngwa otu nke kasị mma music ahazi, usoro ihe omume rite kasị elu kpakpando fim n'etiti ya dị iche iche asọmpi. The revolutionary software na-agbanwe agbanwe dum usoro nke ijikwa, na-ahazi na chọpụtara dijitalụ music collection.
• The smart atụmatụ nke ngwa akpọ 'Tuniverse' awade pụrụ iche music chọpụtara nhọrọ dị ka obodo, ahaziri egwu alerts, na-achọta ọhụrụ music releases ka kwa gị genre proclivity.
• The 'DeDuper' atụmatụ nke software-enyere gị aka n'ụzọ dị irè wepụ oyiri faịlụ site na iji elu now fingerprinting technology.
• The ngwa na-akpaghị aka na-achọpụta na fixes gị mgbasa ozi faịlụ ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma.
• Ebe ọ bụghị a standalone software ma a nkwụnye na, ọ enhances arụmọrụ nke tupu arụnyere iTunes na Windows Media Player . ụkọ ihe ụfọdụ: • The free ikpe mbipute-enyere gị aka idozi naanị ruo 50 tracks. • The elu atụmatụ, mgbe ụfọdụ, na-aghọ mgbagwoju anya iji n'ihi na beginners.
akwado Operating System: Windows About: Foobar2000 bụ ihe Egbochighi freeware na-arụ ọrụ dị ka a standalone software maka ngwaọrụ gị. Mgbe mmelite maka ngwa na-nyere site mmepe. Ndị ọhụrụ version abịa na ọnyà arụmọrụ optimizations na-enyere gị aka hazie a buru ibu ọnụ ọgụgụ nke ọdịyo faịlụ gị ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma.
• N'ụzọ dị iche na ndị ọzọ music ahazi na-abịa na a mgbagwoju anya interface, Foobar2000 nwere minimalistic na mfe interface na mma arụmọrụ.
• The software nwere wuru na-music ọkpụkpọ na-akwado fọrọ nke nta niile ọdịyo faịlụ formats.
• The gapless playback atụmatụ na Foobar nwere-enye gị ohere na-egwu gị ọdịyo faịlụ enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge / nkwụsị.
• Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị na kasị vasatail music ahazi na ike ijikwa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọdịyo faịlụ na ala.
• The ngwa na-abịa na a kpam kpam customizable interface.
• Foobar2000 nwekwara a nkwụnye na usoro na pa na Firefox. ụkọ ihe ụfọdụ: • The ngwa nwere nkpoda mmụta usoro na-achọ agafeghị oke ka elu Mgbakọ nkà na-eme ka o sie ike iji maka beginners. • E nweghị Help Forum maka software otú na ị bụ na gị onwe gị na mgbe ọ na-abịa na-aghọta a akpan akpan atụmatụ. • Ọ dịghị wuru na-video ọkpụkpọ na ya mere, unu nwere ike igwu na hazie ọdịyo faịlụ naanị na gị n'ọbá akwụkwọ.
akwado Operating System: Windows About: MusicBee bụ otu oru oma ngwá ọrụ iji hazie, chọọ na-egwu music faịlụ na desktọpụ gị kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ PC. N'ụzọ dị iche na ndị ọzọ na asọmpi, MusicBee bụ a freeware na-agụnye nile bụ isi na elu atụmatụ nke otu oru oma music Ọhazi. Iji ngwa a, ị nwere ike hazie egwu gị ọbá akwụkwọ mfe. The software eji Na Audio Library.
• MusicBee bụ ihe Egbochighi freeware na-agba dị ka a standalone software na ngwaọrụ gị.
• The ngwa na-abịa na a larịị ma kensinammuo interface na streamlines usoro nke na-ahazi gị music n'ọbá akwụkwọ.
• MusicBee na-akpaghị aka okụt na fixes-efu metadata gị media faịlụ site enyocha ọmụma si online ọdụ data.
• The elu music ọkpụkpọ na-abịa na a gapless playback atụmatụ na-enyere gị na-egwu ọdịyo faịlụ-enweghị nkwụsị.
• Ị nwere ike mbubata media faịlụ site na gị iTunes Ọbá akwụkwọ na Windows Media Player iji MusicBee.
• The software -enye gị ohere conveniently hazie gị audio faịlụ n'ime nchekwa dabeere na mkpado ụkpụrụ dị ka album, aha, genre, wdg ụkọ ihe ụfọdụ: • The ngwa adịghị nwere wuru na-video ọkpụkpọ. • MusicBee Nwela ebudatara dị ka a .zip faịlụ nke, mgbe ụfọdụ, emepụta mbipụta n'oge nwụnye. • Multiple ọnụ ọgụgụ nke ntọala aghọ cumbersome na mmalite.
akwado Operating System: Mac OS X na Windows About: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji a standalone software iji hazie ma jikwaa gị oke music Ọbá akwụkwọ, MediaMonkey bụ otu nke kasị mma music ahazi na-eme na needful. Ngwa bụ a n'ụzọ zuru ezu ike music ọkpụkpọ, Ọhazi, na encoder na-enyere gị na-egwu ọdịyo faịlụ nke fọrọ nke nta niile ewu ọdịyo faịlụ formats. Mmepe anya nweta nkwalite software nke ya kwesịrị ekwesị ọrụ na sophistication. Ọhụrụ version bụ 4.1.6 na nwere ihe karịrị 40 kwalite atụmatụ gụnyere mma mmekọrịta na Android ngwaọrụ.
• Ị nwere ike mfe jikwaa ọtụtụ puku music na video faịlụ na-enweghị bogging ala gị na kọmputa.
• The kensinammuo atụmatụ nke ngwa na-akpaghị aka fixes na mkpado na metadata nke ọdịyo faịlụ.
• The software enye gị ohere ike ma jikwaa ahaziri listi ọkpụkpọ.
• The customizable interface-eme ka ọ mara mma ma dị mfe iji.
• Ọtụtụ n'ime ndị gụgharia redio na-akwado site na ngwa. ụkọ ihe ụfọdụ: • The nchọgharị window nke software enye mmachi nhọrọ. • MediaMonkey adịghị enye pọdkastị.
5. itucha My Music
akwado Operating System: Mac OS X (version 10.5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) Banyere: itucha My Music bụ a-atọ ndị ọzọ software na Adobe Air ngwa na-ekwe nkwa iji hazie na weghachite oke iTunes n'ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma. Nke a bụ ihe akpaghị aka cleanup ngwá ọrụ na-solves gị iTunes nzukọ mbipụta ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè. Ọhụrụ version nke itucha My Music na-abịa na ịnara iTunes toolbar na-enye gị ẹkedori ma nweta ngwa si ​​n'ime iTunes onwe ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ a na-akwụ ụgwọ ngwa, ọ bụ uru ndị ajụ price nke $ 39.99 (na oge nke a edere) Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu collection nke music gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
• itucha My Music na-akpaghị aka na-agbakwụnye elu mkpebi album nkà gị ọdịyo faịlụ na-eme gị ọbá akwụkwọ niile ọzọ mara mma na anya obi ụtọ.
• The software enye gị ohere ike ahaziri listi ọkpụkpọ site na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ dị ka genre gị ọdịyo faịlụ.
• Nke a bụ a smart omume na-adịghị na-adabere ọmụma gị nyere media faịlụ maka nzukọ nke gị n'ọbá akwụkwọ. Kama nke ahụ, ọ na-abịa na nnukwu nchekwa data site na nke ọ na-eji tụnyere gị songs ka ya echekwara ọmụma.
• The ngwa na-akpaghị aka fixes-efu mkpado ọmụma gị mgbasa ozi faịlụ.
• Iji itucha My Music i nwere ike rụọ ọrụ nke ọma wepụ oyiri faịlụ site na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ . Gịnị na-eme ka ọ ka mma na ndị ọzọ music ahazi bụ na i nwere ike igosi a ule nhichapụ ịdị ụfọdụ na ziri ezi na songs na-ewepụ na oge nke ikpeazụ mwepụ. Ụkọ ihe ụfọdụ: • itucha My Music na-a na-akwụ ụgwọ ngwa. Free ikpe version-enye gị ohere iji hazie naanị 50 audio faịlụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. • The Help Forum nke software bụghị na-akwanyere ùgwù na kọwakwuru nke na-emepụta nsogbu n'ihi na ndị na-agba ọsọ n'ime ihe ọ bụla metụtara ya ịrụ ọrụ.
akwado Operating System: Mac OS X, Windows, na Linux. About: MusicBrainz Piccard bụ ihe ukara MusicBrainz tagger na music Ọhazi e dere na Python mmemme asụsụ. Ọ bụ ezie na nke a bụ a cross-ikpo okwu dakọtara ngwa, ọ na-arụ ọrụ kasị mma na Mac OS X n'elu ikpo okwu. The elu atụmatụ na-ẹkenam ke ọhụrụ version na ihe n'uche na-eme ka ọ na-esote ọgbọ music Ọhazi maka MusicBrainz. Gịnị na-eme ka ọ ka mma karịa ya ndị asọmpi bụ na ndị ọhụrụ version na-elekwasị anya album na-agba mbọ geo ka megide soro na-agba mbọ geo ahụ bụ n'ebe na mbụ 'Omuma' version. Nke a na obibia-enye gị ohere idozi faịlụ na a akpan akpan album ahapụ n'azụ na-achọghị n'anya.
• The now fingerprinting technology ji site software na-akpaghị aka fixes na-anọchi-efu mkpado ọmụma gị ọdịyo faịlụ.
• The ọcha ma streamlined interface nke software enyere ọbụna ndị na-erughị ahụmahụ ọrụ na-awụgharị ngwa rụọ ọrụ nke ọma na na ala.
• MusicBrainz Piccard akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ formats na-enye gị ohere wụnye ọzọ plugins.
• The ngwa na-abịa na a wuru na-search engine, si otú eme ka ị chọta a dịgasị iche iche nke ọdịyo faịlụ mfe. ụkọ ihe ụfọdụ: • Ụfọdụ ọrụ kwuputela ha akpata nchegbu ahụ nche na nzuzo mbipụta dị ka software enyocha kwa na rummages site dum ike mbanye-akpaghị aka. • The Help Forum nke MusicBrainz bụghị bara uru.
Disclaimer: The kọwara software ngwa na-atụle ndị kasị mma dabeere na nkezi ọrụ Fim naanị. E nweghị ezi uche na ikpe nyere site akwụkwọ ma ọ bụ na saịtị ọ bụla.
Top 5 softwares ka Download Soundcloud Mp3 Free
Olee otú Download Music Kpọmkwem ka iPhone
Apple Music Nchekwa
> Resource> Music> Best Music Ọhazi maka iTunes / Windows na Mac OS X